Politika momba ny fiainana manokana - Vaomiera iraisam-pirenena momba ny atody
Ny International International Egg Commission Politika momba ny tsiambaratelo
Ny Vaomieran'ny Eglizy Iraisam-pirenena dia manaja ny tsiambaratelonao. Azafady vakio tsara ity Politika ity mba hahitanao ny fomba hitondranay ny mombamomba manokana izay omenao anay na rehefa mampiasa ny tranokalanay na amin'ny toe-javatra hafa rehefa manangona angona avy aminao izahay. Izahay dia hikarakara tsara ny fiarovana ny mombamomba anao ary hisorohana ny fahazoan-dàlana tsy nahazoana alalana na hampiasana izany. Izahay dia mandefa ny fampahalalana rehetra mifanaraka amin'ny lalàna miaro ny data. Azontsika ovaina tsindraindray io lalàna politika momba ny tsiambaratelo io ary manomboka ny fanovana raha toa ka hita ao amin'ny tranokalanay ny fanavaozana ny fanavaozana. Azafady mba jerena ity politika ity isaky ny andefasanao ny mombamomba anao.
Ny vaovao omenao
Azonay hangataka aminao izahay hanome vaovao aminay na hanangona angon-drakitra avy aminao amin'ny tranga samy hafa, ao anatin'ireo teboka marobe ao amin'ilay tranokala, toa anao:
(a) fanontaniana an-mailaka na ny fijerinao anay;
(b) miditra amin'ny fifaninanana;
(c) misoratra anarana mba hahazo vaovao; na
(d) mividy entana na serivisy aminay
Ny vaovao izay angatahina aminao hanome izany dia miovaova arakaraka ny anton'ny fanangonana. Amin'ny tranga sasany, ohatra, raha mividy entana na serivisy aminay ianao, dia tsy maintsy atao ny fanomezana fanazavana sasany. Azafady azafady fa raha misafidy ny handray anjara amin'ny fifanakalozan-dresaka momba ny dinika ao amin'ilay tranokala ianao dia mety hampahafantatra ny momba anao manokana amin'ireo mpandray anjara hafa. Raha manao izany ianao dia tandindomin-doza anao izany.
Ahoana ny fampiasan'ny kaomisionan'ny atody iraisam-pirenena ny vaovao
(a) mamaly amin'ny fanontanianao;
b) mitantana ny fifaninanana mifanentana;
(c) mandefa vaovao aminao;
(d) manatanteraka ny fifanarahana azonay hiarahanao aminao;
(e) alefaso aminao ny fampahalalana momba ny varotra araka ny fepetra voalaza eto ambany.
Raha lasa mpanjifan'ny mpanjifanay izahay, amin'ny fividianana entana na serivisy aminay, dia afaka mandefa fampahalalana fanampiny anao izahay amin'ny alàlan'ny paositra na e-mail mifandraika amin'ny fividiananao na hifandray aminao amin'ny telefaona. Raha tsy te-hahazo izany vaovao izany ianao na hifandray ianao dia manorata any amin'ny Tale Jeneraly amin'ny adiresy etsy ambany.
Izahay, ny orinasam-pifandraisanay ary ny antoko fahatelo voafantina (toy ny mpiara-miasa aminay mpivarotra) dia te handefa ny vaovao momba ny varotra amin'ny alàlan'ny paositra, mailaka, na SMS. Izahay dia hataonay fotsiny raha toa ka nasehonao fa faly ianao mahazo ny fampahalalana toy izany rehefa mametraka ny antsipiriany aminao izahay.
Azontsika atao ny manangona ny fampahalalana izay omenao anay amin'ny angon-drakitra hafa (mba tsy ho fantatrao avy amin'izany data izany) ary hampiasa izany angon-drakitra io ho an'ny tanjon'ny mpitantana ary / na zarao amin'ny olona hafa.
Hizarao ny mombamomba anao amin'ireo mpamatsy serivisy fahatelo izahay raha ilaina izany. Ny mpamatsy tolotra an'ny fahatelo dia tsy afaka mampiasa ny fampahalalana anao amin'ny tanjon'izy ireo manokana. Izahay koa dia hizara ny fampahalalana anao amin'ny mpiara-miasa ara-barotra aminay amin'ny tanjona marketing (mifanaraka amin'ny andalana farany) raha toa ka nanambara ianao fa faly mandray izany fampahalalana izany.
Ny tranokalanay dia mety misy rohy mankamin'ny tranonkala hafa. Fantaro azafady fa tsy tompon'andraikitra izahay amin'ny fampiharana manokana ireo tranokala ireo. Mamporisika ny mpampiasa anay izahay mba ho mailo rehefa miala amin'ny tranokalanay izy ireo ary mamaky ny fanambarana momba ny tsiambaratelo azo ampiharina amin'ireo tranokala ireo. Ity politika manokana ity dia tsy mihatra amin'ny fampahalalana nangonina tamin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo.
Ny zonao hiditra ny vaovao
Manan-jo hahazo ny vaovao izay nohajain'ny Vaomieran'ny Eglizy Iraisam-pirenena momba anao ianao. Mba hahafahana manao izany dia manaova fampiharana an-tsoratra ho an'ny Tale Jeneraly, amin'ny adiresy etsy ambany. Ny Vaomieran'ny Eglizy Iraisam-pirenena dia mety mitaky anao hanome fanamarinana ny mombamomba anao ary handoa saram-pitantanan-draharaha (10 dolara ankehitriny) no hanomezana ny kopia fampitaovana izay mitazona azy. Azafady azafady fa amin'ny toe-javatra sasany, ny Vaomieran'ny Eglizy Iraisam-pirenena dia tsy afaka miditra amin'ny fampahalalana anao izay manana zo hanao izany eo ambanin'ny lalàna miaro ny data amin'izao fotoana izao.
Fanavaozana ny fampahalalana misy anao
Raha misy ny fanovana ny mombamomba anao manokana, ohatra ny antsipiriany momba ny fifandraisana anao, azafady mba ampahafantaro anay amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny Tale Jeneraly ao amin'ny adiresy nomena etsy ambany, mba hahafahantsika mihazona ny fampahalalana anao hatramin'ny farany sy araka ny marina. Raha tsy izany, raha misy ny fanavaozana ny mombamomba anao ao amin'ny fizarana mpikambana ao amin'ilay tranokala.
Ampiasaina ny mofomamy mba hitehirizana ny antsipirihany lozisialy izay ahafahan'ny tranokala hanolotra anao "hahatsiaro" anao. Raha tsy te-hanana mofomamy avy amin'ny tranokalan'ny Komity International Egg Commission izay voatahiry ao amin'ny solosainao ianao, azafady azafady manjary izany safidy izany eo amin'ny taratasy fidirana.
Raha manana fanontaniana momba ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ianao dia maniry ny hampiato ny fivarotana mivantana ataon'ilay Vaomieran'ny Eglizy Iraisam-pirenena, ny orinasam-pananana na maniry ny hiditra ianao na hanavao ny fampahalalana azafady soraty amin'ny Tale Jeneraly amin'ny adiresy voatanisa ao amin'ny Mifandraisa aminay page.